Latest Myanmar News - Page 171 of 220 - News & Media
June 15, 2020 by Latest Myanmar News
နှာစေး၊ချောင်းဆိုးနဲ့ လည်ချောင်းနာအတွက် ဇီယာ ဇီယာရွက်ထူပင်ကို အင်္ဂလိပ်လို Country borage,Indian borage,Mexican Mint,Spanish thyme စသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ကြပါတယ်။ ရုက္ခဗေဒနာမည်ကတော့ Coleus aromaticus Benth. ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုရင်းကတော့ Labiatae ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံအပြားမှာ အလေ့ကျပေါက်ပင်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း စိုက်ပျိုးပင်အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ရှည်ခံပင်ပျော့ ပင်ငယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အရွက်မှာထူပြီး မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အမွှေးနုလေးတွေပါရှိပါတယ်။အရွက်ပုံစံက ဘဲဥပုံရှိပြီး ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ရွက်နားတွန့်ရှိပြီး စူးရှရှရနံ့ရှိပါတယ်။အပွင့်မှာအလွန်သေးငယ်ပါတယ်။အသီးအနေနဲ့တော့ရှည်လျားပြီး အမြှောင်းခြောက်မြှောင်းပါရှိပါတယ်။ ဇီယာရွက်ထူပင်မှာ Volatile oil,diterpenes(forskolin)စတဲ့ဓါတုဒြပ်ပေါင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုဒြပ်ပေါင်းတွေပါတဲ့အတွက် ဇီယာရွက်ထူပင်ဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုသေစေနိုင်သောအစွမ်းသတ္တိ၊လေရှုပြွန်ကိုကျယ်စေသောအစွမ်း၊ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေကိုလျော့ပါးသက်သာစေသောအစွမ်းသတ္တိ တွေရှိပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဇီယာရွက်ထူပင်ကို နှာစေးချောင်းဆိုးရောဂါ၊ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊နားရောဂါတို့အတွက် တိုင်းရင်းဆေးဖော်စပ်ရာမှာ တခြားဆေးဘက်ဝင်အပင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အချိုးကျရောပြီး သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဇီယာရွက်ထူပင်ရဲ့အိမ်တွင်းသုံးဆေးမြီးတိုအနေနဲ့ အသုံးဝင်ပုံကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ချောင်းဆိုး၊လည်ချောင်းနာသက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း ချောင်းဆိုးတာ၊လည်ချောင်းနာတာဖြစ်ပါက ဇီယာရွက်ထူပင် အရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီး ဝါးစားပေးခြင်းဖြင့်သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ အရွက်အစိမ်းလိုက် ဝါးမစားချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ … Read more
June 14, 2020 by Latest Myanmar News
မိမိတို့ ခြံဝင်းထဲ ကျွန်းပင်စိုက်ထားရင် အစိုးရပိုင် ဖြစ်သလား.. “ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ အင်ကညင် စတဲ့ အဖိုးတန်သစ်တွေကို မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် ခြံတွေမှာ စိုက်ပျိုးထားရင် အစိုးရက လာသိမ်းလိမ့်မယ်၊ မစိုက်ရဲဘူး” ဆိုတဲ့ လူအတော်များများ ရှိကြပါတယ်။ ပူမယ်ဆိုရင်လည်း ပူစရာပါပဲ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သစ်တော ဥပဒေမှာ “မည်သူမဆို ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ တစ်တန်ထက်ပိုသော ကျွန်းသစ်ကို ထုတ်ယူခြင်း၊ သယ်ယူရွှေ့ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းပြုလျှင် ထိုသူအား အနည်းဆုံး ၅နှစ်မှ အများဆုံး ၁၅ နှစ် အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ကျပ်သိန်း ၃၀ ထက်မပိုသော ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။” လို့ ဆိုထားတော့ နည်းနည်းတော့ စိုးရွံ့ကြတာပါပဲ။ တကယ်တော့ ခေတ်တွေ စနစ်တွေပြောင်းခဲ့ပါပြီ။ … Read more
အရိုးက်င်ဆာ ပျောက်တဲ့ မှိုကွန်ချာ ကျော် မှတ်ထားတာလေးကို မျှဝေတာပါ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က FB မသုံးစွဲကြပါဘူး နတ္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ဖတ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာက အခုလို ဆေးဖက်ဝင်သော အကြောင်းရာတွေကို အကိုးကားနဲ ပါလေ့ရှိပါတယ် ။ လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးဝင်ပြီး အစွမ်းထက်သော အရာများကို မှတ့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မှတ်ထားတဲ အကြောင်းရာလေးကဒီလိုပါ ဟင်္သတ မြိုနယ် တောရွာဘက်က ဦးလေးတယောက်ဟာ အရိုးကင်ဆာ ဖြစ်လို ဆေးရုံက ခြေထောက့် တဖက် ဖြတ်ဖို ရက်ချိန်းပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ ထိုဦးလေးဟာ ခြေထောက်တဖက်တော့ မဖြတ်တော့ဘူး ဒီအတိုင်းသာ အသေခံသွားမယ်ဟု ဆိုကာ အရိုးကွဲမတတ့် ကိုက့်ခဲ နေသော ဝေဒနာကို ကြိတ်မှိတ်ပြီး အန်တုကာခံနေပြီး ဆေးရုံရက်ချိန်ကို မသွားတော့ပါဘူးတဲ့ ဒီလိုဖြစ်နေချိန်မှာ … Read more
၀ါတွင်းရက် (၉၀)စာ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်း
မကြာခင်မှာဝါဝင်တော့မှာဆိုတော့Saveထားလို့ရပါပြီ ဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်တဲ့ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်နည်းလေး စိပ်ရမဲ့ ရက်လေးတွေ သက်မှတ်ပြီးပါပြီ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့(ဓမ္မစကြာနေ့မှ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့)ထိဖြစ်ပါတယ် သက်သတ်လွတ်လည်း စားစရာမလိုပါဘူး အချိန်လည်း တိတိကျကျစိပ်စရာမလိုပါဘူး နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင့် စိပ်မဲ့ နေ့ရက်များ ၉ပါးစလုံးကိုနေ့တိုင်းတစ်ပတ်စီ အရဟံ (၁)ပတ်၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ၊ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော (၁)ပတ် ၊သုဂတော (၁)ပတ် ၊လောကဝိဒူ (၁)ပတ် ၊ အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာရထိ (၁)ပတ် ၊သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ (၁)ပတ် ဗုဒ္ဓေါ (၁)ပတ် ၊ ဘဂဝါ (၁)ပတ် ၊ 3.. 8 . 2020. မှ ၊ 11. 8 . 2020 အထိ အရဟံ သိဒ္ဓိ (၉)ပတ် … Read more
စကားပွင့် ပန်းကို သုပ်စား ကြော်စားကြတာများပါတယ် အပွင့်ခြောက်ကို နေပူလှန်းပြီး သောက်ကြည့်ပါနော်…ဘာတွေကောင်းလဲ ပြောပြမယ် ကျမတော့ နေ့တိုင်းသောက်နေပြီမို့ မသိတဲ့သူတွေ ကို မျှဝေချင်ပါတယ် တရုတ်စကားပွင့်ရည်ကို လက်ဖက်ခြောက်ရည်လို သောက်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်မဲ့အကျိုးလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် မွေးရနံနဲ့တင် လူကို ဆွဲဆောင်နေပါပြီ အနံ့က လန်းဆန်းလို့ အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ် တရုတ်စကားပွင့်ရည်က လည်ချောင်းတွေ ခြောက်သွေ့ပြီး ချောင်းခြောက်ဆိုးတဲ့အခါ လည်ချောင်းနာတဲ့အခါ သောက်ပေးရင် သလိပ်ပျော်စေလို့ အမြန်သက်သာနိုင်ပါတယ် ကိုယ်ပူကျစေတယ် မကြာခဏ နာစေးနေတဲ့သူတွေအတွက် အပွင့်ခြောက်ကို လက်ဖက်ရည်လိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့် လူမမာကို ပြန်လည် ကျန်းမာနိုင်စေပါတယ် အပူကန်တဲ့အခါရော ချွေးထုတ်ဆေး အဖြစ်ရော သောက်ပေးရင် ချွေးနဲ့ဆိုးကို သက်သာစေလို့ အနံမွေးတဲ့ချွေးအဖြစ် ပြောင်းနိုင်အောင် စွမ်းပါတယ် ကိုယ်ထဲက အဆိပ်တွေကို ဝမ်းနဲ့အတူပါအောင်လည်း ကူညီသေးတယ်တဲ့ မကုန်သေးဘူး … Read more
ရိုးရိုးဂီယာ၏ သိထားသင့်သော ကလပ်တို့အကြောင်း
ရိုးရိုးဂီယာမောင်းသူများ သိထားသင့်သော ကလပ်နှင့် ပတ်သက်သမျှ အကြောင်းအရာ အင်ဂျင်နှင့် ဂီယာဘောက်စ် ကြားတွင်ရှိသော ကလပ်အုံသည် အင်ဂျင်ဖလိုင်းဝှီးမှ လှည့်အားပါဝါကို ဂီယာဘောက်စ်မှတစ်ဆင့် Drive Wheel အထိရောက်အောင် ပို့ပေးသည်။ ဂီယာပြောင်းထိုးတိုင်း အင်ဂျင် နှင့် ဂီယာဘောက်စ်ကို အဆက်အသွယ် ဖြတ်ပေးသည်။ ကလပ်ပလိတ်ပြားတွင် ဖိုင်ဘာပြား (၂) ချပ်ကို Revit ဖြင့် ရိုက်ထား ပြီး ဖိုက်ဘာပြား မျက်နှာပြင်နှင့် ဖလိုင်းဝှီး မျက်နှာပြင်တို့ကြားတွင် ပွတ်မှုအားဖြစ်ပေါ်စေရန် Pressure Plate ပြားက စပရိန်တွန်းအားဖြင့် ဖိပေးထားသည်။ ယာဉ်မောင်းသူက ကလပ်ခြေနင်းတံကို နင်းလိုက်ပါက အပေါ်ကလပ်ဆုံမှ ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီ(ဘရိတ်ဆီ)များသည် အောက်ကလပ် ဆုံသို့ဖိအားတစ်ခုဖြင့် ရောက်ရှိပြီး ကလပ်ထိုးတံကိုတွန်းသည်။ ထိုးတံမှ ကလပ်ဖောက်ကိုတွန်းသဖြင့် ကလပ် ဖောက်ကလည်း ကလပ်ဘောလ်ကို ဆက်တွန်းသည်။ကလပ်ဘောလ် … Read more
ပျိုမေတိုင်းအတွက် ထောပတ်သီး၏ အလှအပ လျှို့ဝှက်ချက်
ပျိုမေတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ ထောပတ်သီးကို စွယ်စုံအသုံးပြုနည်း (၅) သွယ် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ခန့်ကတည်းက ထောပတ်သီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အာဟာရအကြွယ်ဝဆုံးအသီးအဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းတင် ခံခဲ့ရပါတယ်။ ထောပတ်သီးဟာ စားလို့ရရုံသာမက စွယ်စုံအသုံးပြုလို့ရတဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးအသုံးပြုနည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပျိုမေတို့အတွက် အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ (၁) နှုတ်ခမ်းသားတွေခြောက်သွေ့အက်ကွဲပြီး အဖတ်တွေ ကွာနေခဲ့ရင် ထောပတ်သီးအနည်းငယ်နဲ့ သံလွင်ဆီကို ရောပြီး ကြေညက်သွားအောင် ရောမွှေလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ အနှစ်ကို နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာလိမ်းပြီး ၂၅ မိနစ်ခန့်အကြာမှာ ရေနွေးလေးနဲ့ဆေးကြောပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ခန့် ပုံမှန်လေးပြုလုပ်ပေးပါ။ (၂) ထောပတ်သီးတစ်ခြမ်း၊ အုတ်ဂျုံမှုန့်် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်းနဲ့ ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်းတို့ကို သမသွားအောင် ရောမွှေပေးပါ။ ရလာတဲ့အနှစ်ကိုယူပြီး မျက်နှာကို စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လိမ်းပေးပါ။ ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာမှာ ရေနွေးလေးနဲ့ … Read more
သွားနာ၊ သွားကိုက်၊ သွားကျဉ်ခြင်းတို့အတွက် ခရမ်းကစော့မြစ်
သွားနာ၊ သွားကိုက်၊ သွားကျဉ်ခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသူများအတွက် အစွမ်းထက် ခရမ်းကစော့ပင် အပင်အမြင့်မှာ တစ်တောင်မှ သုံးတောင်ခန့် မြင့်၏။ ခရမ်းသီးပင် နှင့်တူ၏။ အကိုင်း အခက်များတွင် မာသော ဆူးများရှိ၏။ အရွက်မှာ တစ်လက်မမှ ခြောက်လက်မအထိ ရှည်၍ တစ်လက်မမှ လေးလက်မ အထိကျယ်၏။ အသီးတွင် အဖြူ စက်ကလေးများရှိ၍ အသီးမှာ ဆီးဖြူသီး အငယ်စား ခန့်ရှိ၏။ အရသာမှာ စပ်၊ ခါး၊ ပူဖြစ်၏။ ပိုးရောဂါ၊ သလိပ်နှင့် လေဒေါသကို နိုင်၏။ ယားနာ၊ နူနာတို့ကို ပျောက်ကင်း စေတတ်၏။ အပင်မှာ နှလုံးကို ကျေးဇူးပြု၏။ အများ အားဖြင့် အသီးလုံးများကို ထမင်းဝိုင်းတွင် အတို့အမြှုပ် အဖြစ် စားသုံးကြသလို ချက်၍လည်းစားကြ၏။ သလိပ်ရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ … Read more
ဘုရားပန်း နှင့် ဘေးကင်း လာဘ်ရွှင်
ဘုရားအိုးနှင့်ဓာတ်ပန်းစဉ် (ဘေးကင်း လာဘ်ရွှင်) ဒီစာစုကတော့ မိမိတို့ နေအိမ်ဘုရားစင်ရှိ ဘုရားပန်းများနှင့် ဓာတ်ယတြာများ စီစဉ်မူအကြောင်းကို ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်ရဲ့ ဦးဆောင်စေစားမူ ဓာတ်သဘာဝများကိန်းအောင်းရာကို ပြပါဆိုလျှင် ဘုရားစင်ကိုသာ ပြရမည်ဖြစ်သလို ထိုဘုရားခန်း ဘုရားပန်းများဟာလည်း ယတြာဓာတ်ရိုက်ပညာမှာ အတော့်ကို အလေးထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ ဆရာတွေဟာ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် ပြုခါနီးတိုင်း ပဏာမအနေနဲ့ ဘုရားပန်းကို စီစစ်ပြီးမှသာ မိမိလိုရာ ဓာတ်ကိုဆင်ယင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်ဘုရားပန်းကို ဓာတ်နေအချိန်အလိုက် ပြောင်းလဲ ကပ်လျှူခြင်းဖြင့် လာစေသွားစေ ချစ်စေမုန်းစေ အောင်စေရှုံးစေ စသော ဓာတ်ဆင်ပညာခွင် တစ်ခုလုံးနီးပါး အသုံးပြူနိုင်တာ့ဖစ်ပါတယ်။ (ဒါကို ရေးလျှင် ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ်စာ ထွက်ပါမယ်။) ဒီပို့စ်မှာကတော့ ခုနစ်ရက်သားသမီးများအတွက် လာဘ်ရွှင် ဘေးကင်း ဆင်ယင်ပုံကိုပဲ အဓိက ပြပါတော့မယ်။ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး နံပန်းများကို နံတူရာ … Read more
မူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ဘေးမှ ဘောနပ်ကိုယ်တော်များ
ဘောနပ်ကိုယ်တော်များ ဘောနပ်ကိုယ်တော်ဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောက်မဲ-နောင်ချိုကြားကျောက်မဲ-သီပေါကြားနဲ့သီပေါ-လားရှိုးကြားကမန္တလေး-မူဆယ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး ဘေးမှာကားဘောနပ်ဖုံးဖွင့်ပြီးဖြတ်သန်းသွားလာနေကြတဲ့ ကားကြီးကားငယ်ကအစဆိုင်ကယ်ပါမကျန်တားပြီးတော့ အလှူခံနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ခရီးသွားလာရင်းကားပျက်လို့အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ရဟန်းတွေမဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်ကိုတစ်နေရာရွေ့ အလှူခံနေကြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသတွင်းက ရဟန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကားဘောနပ်ဖုံးဖွင့်ထားပြီး ကားကိုလက်ညိုးထိုးပြကာ ဆီပျက်တယ် အင်ဂျင်ပျက်သွားတယ် စသည်ဖြင့်အကြောင်းပြပြီးအလှူခံပါတယ်။ ကားဆရာတွေကဆီထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ဆီမယူ ပိုက်ဆံဘဲ အလှူခံပါတယ်။ ကဲဟုတ်ပြီ အင်ဂျင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ တပည့်တော်စမ်းသပ်နှိုးကြည့်ပြီးပြင်ပေးမယ်ဆိုလည်း လက်မခံပါ။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေက အခုရက်ပိုင်းမှာ ပြန်တွေ့နေရတာပါ။ ပထမရက်က နောင်ပိန်ရင်ကွဲတောင်’မနေ့ကစဉ့်အင်နဲ့စံလောင်းကြား ကျွန်းတောနေရာတွေမှာ တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ မြို့တွေရွာတွေနဲ့ နည်းနည်းလှမ်းတဲ့နေရာတွေမှာ လှုပ်ရှားပါတယ်။ ကြုံခဲ့ရသူတွေသိမှာပါ။ P o s t တင်သူ ခင်ဗျားမလှူရင်နေပေါ့။ တခြားသူတွေလှူ နေကြတာပြောစရာလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ ပြောစရာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေက ရဟန်းသံဃာဆိုတာနဲ့ ကြည်ညိုပြီးသား။ ကူညီကြ လှူကြတန်းကြ။ အခုလိုမျိုး လက်တဆုပ်စာကိုယ်တော်တွေက သာသနာကိုခုတုံးလုပ် လိမ်လည်အလှူခံနေသည့်ကိစ္စသည် မသင့်တော်သည့် … Read more
← Previous Page1 … Page170 Page171 Page172 … Page220 Next →
တရားနှင့် ဂါထာတော်များ (143)
အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး (154)